Yini Russian engazizwa nogqozi ukuze sauerkraut? abantu Mhlawumbe hhayi enjalo. Lesi yisihloko sokuqala isidlo ekwindla-ebusika ukuthi iya kahle amazambane okulungiselelwe kunoma yiluphi uhlobo, iphalishi kanye nenyama izitsha. Izinzuzo imifino zifakwe emanzini anosawoti, Nokho. Wonke umuntu uyazi ngakho. Nokho, uma umuntu akazi lutho, thina kuyokusiza ugcwalise lesi igebe ulwazi. Futhi ake sixoxe nini amanzi okugqumisa iklabishi kuyinto engcono yini isikhathi sonyaka kufanelekile le nqubo.
Okokuqala, lesi sidlo iwumthombo omuhle ka-vitamin C, okuyinto kubhekwa isithako kakhulu ekunakekeleni ukunakekela ebusika. Futhi khona uvithamini omuncu K futhi ezinye zazo senkolweni B. Phakathi kwabo, B1 - B3, B6, B12. Lezi zici ziye nilimaza-ukuphulukiswa, nezinye okubuyisela kubaluleke kakhulu sezindawo isimiso sezinzwa. Futhi kulo mkhiqizo iqukethe amaminerali ezilandelayo: yensimbi, boron, i-potassium, i-silicon, ithusi kanye nabanye.
Ngakho lapho lo sawoti?
Omama abaningi abasemakhaya kanye Sebawoti banikwa umbuzo obudisi: "Lapho anosawoti ? iklabishi ebusika" Kuleli amaphuzu khona nekolko imibono. Abagqugquzeli isimangalo kuqala ukuthi lokhu kungenziwa kulo ebusika. Kodwa kungaba ngcono, yebo, uma uthatha umcimbi esibaluleke kangaka emva frost nochnyhe lokuqala, t. E. Esikhathini kwekwindla. Ngakho, isithwathwa bolimi iklabishi ngasekupheleni ilahlekelwa ubumunyu bayo esingokwemvelo. Gcina bese lokhu dish kuba lula.
Le nguqulo yesibili imayelana nokuthandana phakathi nini amanzi okugqumisa iklabishi, uthi omunye kumele bahlanganyele izikhala enjalo ngokuvumelana ikhalenda kwenyanga. Ngosuku lwesihlanu noma lwesithupha ngemva kwenyanga pickled imifino kuvela esiphundu kunazo kanye crispy. Ngakho ngeke, by Ekuthathweni ke esikhathini inyanga Waxing. New inyanga futhi inyanga eyehlayo avuse ukuthambisa perekisanie kanye iklabishi.
Kodwa kukhona omunye imfihlo kancane mayelana lokuthi lapho kungcono amanzi okugqumisa iklabishi. Lungiselela eziningi appetizer ayizintandokazi zakho best okuthiwa izinsuku zabesifazane ngesonto (ngoLwesithathu nangoLwesihlanu), ne ekuqaleni kuka-October, futhi nakanjani ngesikhathi inyanga Waxing. Ngaleso sikhathi umzimba wasezulwini kunomthelela kabusha ukuphila futhi ukukhula kwamagciwane okudingekayo ukuze lwalungabola. Inyanga eyehlayo kuvimbela kilelihlelo. Abesilisa nabo Kunconywa ukuba enze umkhiqizo omuncu kunoma yiziphi "owesilisa 'izinsuku.
Nakani! Uma intombazane sicatshangelwa ukwenza amanzi okugqumisa phakathi nezinsuku ezibucayi, iklabishi esihlwabusayo abakwazi ukulinda. Noma kunjalo, sacabanga kanjalo ngisho ogogo bethu, futhi kubalulekile ukulalela Folk ukuhlakanipha. Ngakho-ke kungcono ukulahla lo mbono futhi ukulinda kancane.
Izitsha, usawoti, iklabishi
Lapho salting iklabishi ebusika - siyaqonda. Manje kufanele wazi ukuthi yini ngempela kufanele kube imifino, izitsha kanye usawoti ukulungiselela isidlo zivulelwe out okumnandi, crispy futhi ziwusizo.
Ngakho, khetha iklabishi. Ithanda ukhethe srednepozdnih ekuphambukeni noma izinhlobo sekwephuzile. Ngezinye gourmet ethandwa "Inkazimulo." izithelo kwesikhathi kulula ukubona ngenxa yabo eKočani aminyene futhi unganyakazi. Bona beyibonakala kancane eyayigcwele. Ungalokothi ukuthenga pickling imifino emabangeni lasekucaleni. iklabishi okunjalo friable futhi ube tint oluhlaza. uju pickled uthole efanayo, akumnandi futhi akusho neqhaza umbala iphango.
I izitsha enemisebenzi kakhulu pickling kubhekwe thini nemigqomo ngokhuni. Lapho udinga amanzi okugqumisa iklabishi, kungcono makudle iziqukathi ezinjalo. By endleleni, ngo isidlo sokhuni njalo ukulungele ebusika isidlo, ugogo wethu, ukhokho futhi ukhokho. Uma uphatha ukuthola rarity enjalo, wena lucky ngokwanele. Uma kungenjalo, khona-ke akhuphuke eyigugu ibhakede noma imbiza. Into kuphela okudingeka uyenze - kuyinto ukuhlola khona izinto chips. Plastic emathileyi ukudla futhi singaba usizo kabi. Into kuphela kufanele zigwenywe - esitsheni eyenziwe aluminium. Ngo shards ezinjalo amahlumela uzithande metallic futhi empunga tint.
Ukukhetha isithokelo for pickling iklabishi, sinake itshe elikhulu usawoti. Kuyinto the best phakathi nezinye izinhlobo. usawoti Iodized kulokhu akudingekile. Nakuba kuyasiza, kodwa kuyokwenza iklabishi esithambile.
Njalo wekhaya isebenzisa iresiphi ezifakazelwe ngoba neklabishi. Futhi uyanezela ngumnikazi izithako ozithandayo. Kodwa thina namanje bakutshele ukuthi ungakwazi ukwengeza ukuze isidlo. Lapho usawoti iklabishi, ecacile ucishe. Manje ake uzame ukucacisa lapho izingxenye Site ukulungiswa izitsha yasekuqaleni. Ngokwemvelo, ngokwakho iklabishi, futhi-ke, usawoti. Kodwa kusadingeka isanqante. Ngakho, eziyishumi khilogremu iklabishi zidinga 300 amagremu of izaqathe, 200 amagremu kasawoti. Lezi ngezabelo olihlolile futhi rechecked izikhathi latinkhulungwane letinyentana. Futhi uma inkosikazi imfundamakhwela, ababone okokuqala lwalungabola iklabishi, lapha lokhu kubala kufanele kuthathwe njengesisekelo.
Kodwa lawa izingxenye eziyinhloko. Ngaphezu in a amanzi okugqumisa Ungabeka apula - lonke noma uthathe nezixhobo ezinkulu. Antonovka - ephelele lolu khetho. Delicious ithuba iklabishi isibilile nge plums eqinile, bell pepper, cranberry, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi impande noma cranberry. Futhi lokho Kwatholakala Pudding elimnandi kanye inkathi ngayo imbewu ikhumini noma fennel.
Ngakho isikhathi sesifikile lapho kungenzeka ukuba amanzi okugqumisa iklabishi: Usuku okahle, zonke izinto ekhishini endaweni, imikhiqizo ayatholakala. Ngakho, usukulungele uqhubeke ngqo inqubo ukupheka. Thatha iklabishi baliqume ngommese noma shinkuem ku grater ezinkulu. Uma ufuna ukwenza zonke izinto ngokushesha ngangokunokwenzeka-ke idivayisi yesibili esifanelana kangcono. Uma isikalo sokungabuyiseleki yobuhle kunokuba isivinini, khona-ke thatha ummese. Sika iklabishi zibe izingxenye ezimbili, bese shinkuem ngokumelene amahlamvu kusukela maphakathi. Manje thina tente umkhiqizo womhlabathi okulungiselelwe endishini enkulu.
Hlikihla noma usike izaqathe kanye nezinye izithako: apula, amajikijolo, nokunye. Zonke mix kanye inkathi ngosawoti. Futhi manje into emnandi kunazo lonke inqubo ukulungiselela - udinga sibhukule yethu futhi iklabishi Mash sengathi uxove inhlama. Ngemva kwalokho, isicelo Ngokuzayo inombolo 1 ukuziqalela ijoka bese ulinda kuze kube yilapho omuncu.
Sauerkraut njengendlela umuthi
I izakhiwo ezuzisayo, ephulukisa kwalo mkhiqizo kulotshiwe eningi izihloko. isaladi okunjalo udlala indima "umhlengikazi pheshana emathunjini", njengoba acetic futhi acidosis acid, okukhona kuwo, zivimbela ukukhula kwamagciwane putrefactive. Futhi abantu abakhuluphele, zinesibopho ukwenza ekudleni kwakho, lesi sidlo-kilojoule amaningi esiza ashise amanoni. It has a lot of fibre. It lubopha carbohydrate, okuyinto enomthelela imvume yabo okusheshayo kusuka emzimbeni.
Njengoba asebenzelana ngayo lapho anosawoti iklabishi, ngingathanda ukwazi ukuthi nezinye izakhiwo ewusizo ke anazo. Zifakwe emanzini anosawoti iklabishi yemifino ikhuthaza ukugaya engcono, ulawula ibhalansi acid-base, kuholela amazinga cholesterol evamile kanye kashukela.
Isexwayiso! Kodwa, kungaba yingozi
Kunezindlela eziningana izifo lapho ukusetshenziswa neklabishi kungaba yingozi. Lezi zifo zihlanganisa izifo kwamanyikwe, ukungasebenzi kwezinso, umfutho wegazi ophezulu kanye kumiswa amatshe atholakala enyongweni. Amazinga aphezulu acid organic kule isaladi kungenziwa ukuyithukuthelisa exacerbation izifo ngenhla. Futhi, ochwepheshe musa ukweluleka ukuzitika on bendabuko uju Russian labo izinkinga zendlala yegilo.
Kanjani futhi nini anosawoti kahle iklabishi - umfundi asekwazi kakade. Ngithanda ukusho ukuthi leli isidlo lavuselelwa Amazing e-Ukraine, Germany neFrance. Ngakho-ke, cishe, kungaba yiphutha ukucabanga ukuthi kufakazela ukuthi bendabuko isidlo Russian. Futhi akunandaba ukuthi livelaphi. Into esemqoka ukuthi Liyindawo esihlwabusayo futhi unempilo. Ngakho-ke, ukudla ezempilo uthole amavithamini, ikakhulukazi manje ukuthi kungcono ebusika ngaphandle, ngakho umzimba uyakudinga izakhi mkhondo ulahlekile.